Wax ka baro magacyada xiddigaha Taajiriinta ahaa ka hor inta aysan soo gilin kubadda cagta! – Gool FM
Wax ka baro magacyada xiddigaha Taajiriinta ahaa ka hor inta aysan soo gilin kubadda cagta!
(Turin) 15 Agoosto 2019. Kubadda cagta caalamka waa mid inta badan sameysa lacagta waxaase laga yabaa inaad iminka is weydiinayso sida ay kubadda cagtu u sameyso lacagta, balse waan ku tusaaleyn doonnaa.
Qaar ka mid ah ama inta ugu caansan ee kubadda cagta ayaa la soo wariyaa inay badi yihiin xiddigo ku soo koray faqri sida, CR7, Dani Alves, Alex Sanchez, Luka Modric iyo Angel Di Maria, waxaadse ku fikireysaa in dhammaan xiddigaha ugu caansan ee kubadda cagta ciyaara ay ahaayeen kuwa faqri ku soo koray ka hor bilawgoodii dheesha kubadda cagta, balse taasi sax ma’ahan.
Warbixintaan oo aad u xiiso badan ayaan ku eegi doonnaa xiddigahan Taajiriinta ahaa ka hor inta aysan soo galin kubadda cagta caalamka, sidoo kale halka ay kaga timid taajirnimadaasi ma iyaga ayaa shaqeystay mise walidkooda ayaa hantiilayaal ahaa?.
Waxaa warbixintaan idiin diyaariyay Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho, waxaana wadajir u soo jeedinaya Haaruun Yuusuf Khasaaro iyo Sagal Daahir Qaasim.
Hordhac: Athletic Bilbao vs Barcelona – Wax walba oo aad uga baahan tahay kulanka furitaanka horyaalka La Liga xili ciyaareedka cusub ee 2019/20